09/09/2021 - ALANZAYAR
ထောင်ထဲက အတူနေ အခန်းဖော်ပြောပြတဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင် အကြောင်း (မအူဝဲလောက်အေးချမ်းတဲ့မင်းသမီး မတွေ့ဖူးဘူးတဲ့)
ထောင်ထဲက အတူနေ အခန်းဖော်ပြောပြတဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင် အကြောင်း (မအူဝဲလောက်အေးချမ်းတဲ့မင်းသမီး မတွေ့ဖူးဘူးတဲ့) “ဒီနေ့ အထဲကို မအူဝဲရောက်နေတာ ၅ လပြည့်တဲ့နေ့လေး အမနဲ့ပက်သက်ပီးစာလေးနဲနဲလေးရေးချင်လာတာရယ် ဘဝတကွေ့မှာ ကြုံခဲ့ဖူးတဲ့ ဘဝမှာ အမလောက်အေးချမ်းတဲ့မင်းသမီးမျိုးတကယ့်ကို မမြင်ခဲ့ဖူးဘူး ရူပါအထဲရောက်ပီး ၂ ပတ်လောက်နေတော့ အမတို့ရောက်လာခဲ့တယ်။ တစ်ခန်းထဲတူတူနေခဲ့ရပြီး အနေနီးကပ်ခဲ့တဲ့ချိန် အမစိတ်လေးတွေအများကြီးသိခဲ့ရတယ်။ […]
နောက်ဆုံးထွက်သက်အထိ တစ်ဦးရဲ့လက်ကိုတစ်ဦးဆုပ်ကိုင်ရင်း မိနစ်ပိုင်းသာခြားပြီး ဆုံးပါးသွားခဲ့တဲ့ ဇနီးမောင်နှံ
နောက်ဆုံးထွက်သက်အထိ တစ်ဦးရဲ့လက်ကိုတစ်ဦးဆုပ်ကိုင်ရင်း မိနစ်ပိုင်းသာခြားပြီး ဆုံးပါးသွားခဲ့တဲ့ ဇနီးမောင်နှံ Martha Jean Harris အမည်ရှိအမျိုးသား နှင့် Charley Ray အမည်ရှိအမျိုးသမီးတို့ ဇနီးမောင်နှံတို့ဟာ အသက်အရွယ်ရပြီး မတူညီတဲ့ ရောဂါအခြေအနေအမျိုးမျိုးနဲ့ ဆေးရုံတက်ကာ ဆေးကုသခဲ့ကြရပေမယ့် … ၎င်းတို့စုံတွဲဟာ မိနစ်အနည်းငယ်မျှသာခြားကာ ၎င်းတို့ရဲ့နောက်ဆုံးခရီးမှာ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးလက်ချင်းဆုပ်ကိုင်ရင်း ကွယ်လွန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ […]
“တိုင်းမှူးတယောက်သာပါရင် စစ်ကောင်စီပြိုဖို့ဆိုတာ လွယ်လွယ်လေးပဲ” လို့ဆိုတဲ့ CDM ဗိုလ်မှူးဟိန်းသော်ဦး….1
“တိုင်းမှူးတယောက်သာပါရင် စစ်ကောင်စီပြိုဖို့ဆိုတာ လွယ်လွယ်လေးပဲ” လို့ဆိုတဲ့ CDM ဗိုလ်မှူးဟိန်းသော်ဦး…. “ကျိန်းသေတာကတော့ဗျာ ဒီကာလမှာ ပြည်သူ့ဘက်ကို ရပ်တည်တဲ့ တပ်မမှူးတယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊တိုင်းမှူးတယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပါနေရင် ဒီအလှည့်အပြောင်းက ခဏလေးပဲ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ကြောက်နေကြတာတွေလည်းရှိတယ်။… သူတို့ရဲ့ ရာထူးစည်းစိမ်တွေကြောင့်လား၊ ဥစ္စာဓန တွေကြောင့်လား၊ ဒါမှမဟုတ်ရင် စကစကိုပြန်တိုက်ရမှာကိုပဲ ကြောက်နေတာလား၊ ပြည်သူ့ဘက်ကို ရပ်တည်မယ်ဆိုရင် […]
“တိုင်းမှူးတယောက်သာပါရင် စစ်ကောင်စီပြိုဖို့ဆိုတာ လွယ်လွယ်လေးပဲ” လို့ဆိုတဲ့ CDM ဗိုလ်မှူးဟိန်းသော်ဦး….
“တိုင်းမှူးတယောက်သာပါရင် စစ်ကောင်စီပြိုဖို့ဆိုတာ လွယ်လွယ်လေးပဲ” လို့ဆိုတဲ့ CDM ဗိုလ်မှူးဟိန်းသော်ဦး.. “ကျိန်းသေတာကတော့ဗျာ ဒီကာလမှာ ပြည်သူ့ဘက်ကို ရပ်တည်တဲ့ တပ်မမှူးတယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊တိုင်းမှူးတယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပါနေရင် ဒီအလှည့်အပြောင်းက ခဏလေးပဲ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ကြောက်နေကြတာတွေလည်းရှိတယ်။.. သူတို့ရဲ့ ရာထူးစည်းစိမ်တွေကြောင့်လား၊ ဥစ္စာဓန တွေကြောင့်လား၊ ဒါမှမဟုတ်ရင် စကစကိုပြန်တိုက်ရမှာကိုပဲ ကြောက်နေတာလား၊ ပြည်သူ့ဘက်ကို ရပ်တည်မယ်ဆိုရင် […]
လိုင်းပေါ်တွင်တွေ့ခဲ့သောချစ်သူနှင့် အပြင်၌ချိန်းတွေ့ခဲ့ရာ ဖုန်းထဲကလိုမဟုတ်ဘဲ ဖက်တီးပုတ်ကြီးဖြစ်နေသည့်အပြင် အစားများကိုသာ အားရပါးရစားနေခဲ့သောကြောင့် ထွက်ပြေးလာခဲ့သည့်ကောင်လေး
လိုင်းပေါ်တွင်တွေ့ခဲ့သောချစ်သူနှင့် အပြင်၌ချိန်းတွေ့ခဲ့ရာ ဖုန်းထဲကလိုမဟုတ်ဘဲ ဖက်တီးပုတ်ကြီးဖြစ်နေသည့်အပြင် အစားများကိုသာ အားရပါးရစားနေခဲ့သောကြောင့် ထွက်ပြေးလာခဲ့သည့်ကောင်လေး ယခုကောင်လေး၏ အဖြစ်အပျက်လေးဟာတော့ အလွန်းဝမ်းနည်းခဲ့ရသည့်အပြင် ကြောက်လန့်ပြီး ထွက်ပြေးလာရသည်အထိပင် ကံဆိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်လေးဟာ လိုင်းပေါ်မှတစ်ဆင့် ကောင်မလေးတစ်ဦးနှင့်တွေ့ဆုံကာ ချစ်ကျွမ်းဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ သူ၏ကောင်မလေးကို အရမ်းချောမောလှပလိမ့်မည်ဟု ထင်မှတ်မထားသော်လည်း ချစ်သူမှ ပို့ပေးလိုက်သည့် ဓာတ်ပုံလေးမှာ အလွန်ချောမောလှသဖြင့် ကံကောင်းသည်ဟု မှတ်ယူကာ […]
တားမြစ်ဆေး တွေ ရောင်းနေလို့ လူမှုကွန်ရက်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ သရုပ်ဆောင် သီဟအောင်
တားမြစ်ဆေး တွေ ရောင်းနေလို့ လူမှုကွန်ရက်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ သရုပ်ဆောင် သီဟအောင် တက်သစ်စ သရုပ်ဆောင် သီဟအောင် ဆိုတာ ကျနော်တို့ အားလုံး အရင်က အားပေးခဲ့ကြတဲ့ လူကြမ်း သရုပ်ဆောင် ဦးကိုကိုဦးရဲ့ သားချောလေး တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်နော်။ လက်ရှိကာလမှာ သီဟအောင် […]
အမေရိကားရဲ့ MasterChef season(11) ပြိုင်ပွဲကြီးမှာ ဖိုင်နယ်ကိုတက်လှမ်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးလေး စု
အမေရိကားရဲ့ MasterChef season(11) ပြိုင်ပွဲကြီးမှာ ဖိုင်နယ်ကိုတက်လှမ်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးလေး စု မြန်မာပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ MasterChef America Season 11 ပြိုင်ပွဲဝင် စု ဟာ နောက်ဆုံးဖိုင်နယ်အဆင့်ကို တက်လှမ်းသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်…..။ ထူးခြားတာကတော့ MasterChef (season 11) ပြိုင်ပွဲမှာ မြန်မာအမျိုးသမီးလေးစုက […]
အွန်လိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဦးဇင်ဝိုင်းရဲ့ ပေါက်ကွဲသံ(နားထောင်ကြည့်ဗျာ) ဝါရင့်သရုပ်ဆောင် ဦးဇင်ဝိုင်းဟာဆိုရင်တော့ အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲတေမှာ ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နစက မှ ဧပြီလ(၁၅)ရက်နေ့က ဖမ်းဆီးခံခဲ့ပါတယ်။ ဧပြီလ(၁၅)ရက်နေ့က ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဥက္ကဌဟောင်း သရုပ်ဆောင်ဇင်ဝိုင်းကို ဇွန်လ (၇)ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းမှာ အင်းစိန်ထောင်က ပြန်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာရခြင်းအကြောင်းကိုတော့ ဒီနေ့အထိ […]
မသန်စွမ်းသူများအတွက် ကျပ်သိန်း (၁၀၀) ဝန်းကျင်ခန့် ခုနှစ်ရက်သားသမီးများနှင့်အတူ လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ မခိုင်နှင်းဝေရဲ့ ယနေ့အလှူလေးကတော့ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်ကနေ အကူအညီတောင်းခံထားကြတဲ့ မသန်စွမ်းသူတွေ အတွက် အလှူဖြစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ အလှူလေးကို ၇ ရက်သားသမီးများနဲ့ အတူ ပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မခိုင်နှင်းဝေကတော့ အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့ မည်သူမဆို တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်ကနေ […]
စက်ရုံတွင်ရှိသော ခွေးလေးကို နေ့စဉ်အစာကျွေးနေခဲ့ပြီး အလုပ်ထွက်လိုက်ရ၍ စက်ရုံသို့မသွားဖြစ်သောအခါ ခွေးကလေးမှ မျက်ရည်များဖြင့် ရောက်ရှိလာခဲ့ ခြေထောင်လေးကို ဖက်ထားသည့်အဖြစ် ခွေးကလေးများသည် အလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့သော တိရိစ္ဆာန်လေးများဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကို တစ်လုပ်စာလောက်ကျွေးမွေးဖူးသော ကျေးဇူးရှင်ကို တစ်သက်လုံးမမေ့တတ်ဘူးဟု ကြားသိရပေသည်။ အမှန်တကယ်တွင်လည်း ခွေးကလေးများသည် သခင်ပေါ်တွင် အလွန်သစ္စာရှိသူများဖြစ်ကြပါတယ်။ ယခုတွင်လည်း ထိုင်းနိုင်ငံမှ အမျိုးသားတစ်ဦးသည် အလုပ်လုပ်နေသော […]